Microsoft Inotangisa Wedzera-ins yeAptlook pane iOS | IPhone nhau
Kunyangwe vashandisi vazhinji vasingatarise Outlook pakati pezvakanakisa kunyorera manejimendi zuva nezuva, Microsoft inotipa imwe yeakanakisa mafomu ekuti tidaro, tichiwedzera mabasa matsva uye pamusoro pezvose, kuteerera vashandisi kunatsiridza, kuchinja kana kuwedzera maficha matsva, chimwe chinhu chinokosheswa uye izvo Apple zvaasina isu kuti tishandise. Microsoft ichangobva kugadzirisa Outlook ichisvika vhezheni 2.1 kuwedzera izvo zvinotibvumidza kushandura mameseji edu kuita maturusi kushanda usinga fanirwe kuita mamwe maitiro munzira inoita kuti tirasikirwe neyakagadzirwa.
Izvi zvinowedzera-zvinotibvumira kusangana neemail atinogashira pasina kusiya kunyorera. Semuenzaniso, pamwe neEvernote neTrello plugins tinogona kuwedzera zvirimo mune imwe yeemail aya kunyorera kana meseji. Nekuda kwekubatanidzwa neGIPHY isu tinogona kupindura kuemail zvakananga neGIF yatinozotsvaga pachikuva icho, zvese pasina kuvhara iyo Outlook tsamba yekushandisa. Imwe sarudzo yatinopihwa nemawedzero aya mukana wekududzira maemail zvakananga nekuda kweMushanduri.
Panguva ino mawedzero ayo anotanga kuwanikwa ndeaya:
Zvese izvi zvinowedzera-uye izvo zvinouya zvichatiponesa yakawanda nguva zuva rega rega kana zvasvika pakutonga email, zvichiita kuti Outlook ive yakanaka chikuva chekuitarisira. Kuti tiise ma-add-ons atinawo tinofanira kuenda kuZvirongwa> Wedzera-on. Chinhu chega chine izvo zvishongedzo izvi, ndezve izvozvi zvinodikanwa kuti isu tinyorese Hofisi 365, kunyorera izvo zvichazodiwa mukati memwedzi yekutanga sezvo zvichinyanya kuitika kuti Microsoft ichaibvisa nekufamba kwenguva, kana isingaite nekufamba kwenguva, nekuti yaisazove kekutanga nguva iyo inoganhurira sarudzo kune Vanyoreri veHofisi 365 vozozvipa mu vakasununguka kune vese vashandisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Microsoft inounza mawedzera-ins eAptlook pane iOS
Mhosva nyowani inopokana neApple, ino nguva yekugadzirisa FaceTime muIOS 6 kutimanikidza kuti tivandudze kuIOS 7